Ngaba AmaNgqina KaYehova Alihlelo? | Imibuzo Abantu Abaqhele Ukuyibuza
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISpanish Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla yaseJamani Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiArmenia (saseNtshona) IsiAssamese IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBashkir IsiBasque IsiBassa (saseCameroon) IsiBatak (SaseToba) IsiBengali IsiBhulu IsiBislama IsiBosnian IsiBoulou IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChin (sesiHakha) IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChol IsiChuvash IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDigor IsiEstonia IsiEwe IsiFante IsiFaroese IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGalician IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiKabiye IsiKabyle IsiKannada IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiKwanyama IsiLamba IsiLatvia IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMapudungun IsiMarathi IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMende IsiMixe IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgangela IsiNgesi IsiNias IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSunda IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTajiki IsiTankarana IsiTarascan IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTok Pisin IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiValencian IsiVenda IsiVezo IsiVietnam IsiWelsh IsiXhosa IsiZulu isi-Igbo isiLow German isiWallisian isiZapotec (saseIsthmus)
Akunjalo, amaNgqina kaYehova akalilo ihlelo. Kunoko, singamaKristu enza konke okusemandleni ethu ukuze silandele umzekelo kaYesu Kristu size siphile ngokuvumelana neemfundiso zakhe.
Abantu balichaza ngendlela ezingafaniyo igama elithi “ihlelo.” Noko ke, makhe sithethe ngeembono ezimbini eziqhelekileyo nesizathu sokuba ezo mbono zingabhekiseli kuthi.
Abanye bacinga ukuba ihlelo lunqulo olutsha okanye unqulo olungaziwayo. AmaNgqina kaYehova akezanga nonqulo olutsha. Kunoko, senza njengoko amaKristu enkulungwane yokuqala enzayo, lawo umzekelo neemfundiso zawo ubhalwe eBhayibhileni. (2 Timoti 3:16, 17) Sikholelwa ekubeni iZibhalo Ezingcwele zinegunya kwindlela esifanele sinqule ngayo.
Abanye bacinga ukuba ihlelo lunqulo oluyingozi olunenkokheli engumntu. AmaNgqina kaYehova awanankokheli ingumntu. Kunoko, sixelisa umzekelo wabalandeli bakaYesu, abathi: ‘Inye iNkokeli yethu, uKristu.’—Mateyu 23:10.
Kunokuba abe lihlelo eliyingozi, amaNgqina kaYehova lunqulo olunceda amalungu alo nabanye abantu ekuhlaleni. Ngokomzekelo, ukushumayela kwethu kuye kwanceda abantu abaninzi bayeka ukuba ngamakhoboka eziyobisi notywala. Ukongezelela, sifundisa abantu ukulesa nokubhala ehlabathini lonke. Siyancedisa nasemva kweentlekele. Sisebenza nzima ukuze sibe ngumzekelo omhle kwabanye, njengoko uYesu wayalela abafundi bakhe.—Mateyu 5:13-16.